नेपालको संविधान-२०७२का ५ मुख्य बिशेषताहरु (डाउनलोड लिंक समेत) – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
अहिले कुनै पनि प्रदेशको नाम राखिएको छैन । प्रदेशमा निर्वाचन भए पछि प्रदेश संसदको दुइ तिहाइले प्रदेशको नामांकरण गर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्ने आयोग बन्ने उल्लेख छ ।
सरकार अस्थिर भएर कार्यसम्पादनमा समस्या आउने सम्भावना कम गर्न शुरुका दुइ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रिको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नै नपाइने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बहुधार्मिक, बहुभाषिक, प्रान्तिय
धर्मनिरपेक्ष र समावेशी नेपालमा सनातान धर्मको संरक्षण गर्दै सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता दिइने उल्लेख छ । यसैको प्रतिक स्वरुप हिन्दुहरुले पुजा गर्ने गाइलाइ राष्ट्रिय जनावर मानिएको छ ।
सरकारी काम काजको भाषा नेपाली भाषा भए पनि संविधानमा सबै भाषाहरुलाइ मान्यता दिइएको छ ।
देशको केन्द्रमा संघीय सरकारका साथै सात प्रान्तमा छुट्टा छुट्टै प्रान्तिय सरकारहरु गठन गरिनेछन् । सात प्रदेशको सीमांकन आन्दोलनरत तराई मधेसका नेताहरुसंग छलफल पछि गरिने छ ।
यस अघि बाबुको नाम बाट मात्र बंशजको आधारमा नागरिकता पाइने भए पनि अब भने आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासिय नेपालिलाइ पनि राजनितिक अधिकार नभएको नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
नयाँ राज्य संरचना
केन्द्रमा दुई संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।
केन्द्रमा मन्त्रिपरिषदका २५ भन्दा बढि बनाउन पाइने छैन। चुनाव हारेका व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्न नपाउँने प्राबधान राखिएको छ ।
प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानिय गरेर तिन तहको राज्य संरचना हुनेछ ।
सबै सात प्रदेशका कुल सांसद ५५० हुनेछन । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरेर प्रान्तिय मन्त्रिपरिषद बन्नेछन । प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट संख्या हुनेछ ।
यि बाहेक महिला र दलितको लागि आरक्षण लगाएतका अन्य धेरै कुराहरु पनि संबिधानमा राखिएका छन् ।
सम्बिधान जारि हुने बित्तिकै यसको अनलाइन संकरण डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने छ ।
सम्बिधानको आधिकारिक प्रति:
यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस
This entry was posted in Politics and tagged CA, constitution. Bookmark the permalink.
← सभासदले हस्ताक्षर गरे, सम्बिधान आश्विन ३ गते राष्ट्रपतिले जारि गर्ने
रिमा विश्वकर्माले आइतबार बिवाह गर्दै →